Ra’iisul Wasaare Sharmaake oo walaac ka muujiyay in Daacish ay ku xoogeystaan Somaliya | Baydhabo Online
Ra’iisul Wasaare Sharmaake oo walaac ka muujiyay in Daacish ay ku xoogeystaan Somaliya
Ra’iisul Wasaaraha Somaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaake, ayaa walaac ka muujiyay Daacish inay ku xoogeystaan Somaliya, xilli xubno ka tirsan Daacish ay ku sugan yihiin Buuraha Galgala ee Gobolka Bari, kadib markii Shabaabkii halkaasi ku sugnaa ay ku dhawaaqeen inay Daacish ku biireen.
Cumar C/rashiid Cali Sharmaake oo Wareysi siiyay Wargeyska Newsweek, ayaa sheegay Daacish inay awood muuqata ku leeyihiin dalalka Syria iyo Ciraaq, balse ay qabaan hadii ay yihiin madaxda Somalida, walaaca ah in Daacish ay awood ku yeelato Somaliya.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay, hadii aanan laga hortagin khatarta Daacish ay leeyihiin inay Saldhigyo waaweyn ka sameynsan doonaan Somaliya, Dowladda Somaliya iyo ciidanka Amisom ayaa dagaal waxa ay kula jiraan Ururka Al Shabaab oo ah kuwa ka dhisan Somaliya.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxuu qiray in qeyb ka goostay Al Shabaab ay haatan ku biiren Daacish, waxuuna sidoo kale tilmaamay in Xubno taageersan Ururka Daacish ay ku sugan yihiin Deegaano hoostaga Maamulka Puntland.
Ra’iisul Wasaaraha Somaliya ayaa sheegay si looga hortago qataraha Daacish inay muhiim tahay in la helo Ciidamo Somali ah oo isku dhaf ah, kuwaasi oo awood u leh ka hortagga Daacish iyo la dagaalanka Ururka Al Shabaab.
Ururka Daacish oo isku magacaabay Dowladda Islaamiga ayaa ka dagaalama xoogooda Syria iyo Ciraaq, qayb ka mid ah dagaalyahanada Daacish ayaa ku sugan Libya, kuwa Somaliya jooga malahan awood badan, laakiin waxaa suuragal ah inay qortaan Ciidamo badan hadii ay helaan Dhaqaale.
Dowladda Somaliya ayaa la hardameysa dagaalka Ururka Al Shabaab lagula jiro oo sanadihii la soo dhaafay horumar yar ay ka sameysay Dowladda, inkastoo Shabaabka ay geystaan falalka lidiga ku ah dhanka ammaanka oo caasimada ay ka fuliyaan.